Shiinaha Customized Ragga dhexda soo saareyaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Bacda dhexda Bacda dhexda > Bacda dhexda ragga
(1) Cabirkiisu wuxuu si sahal ah ula jaanqaadi karaa waxyaabo badan, sida muraayadaha qorraxda, muraayadaha, dalladda, taleefanka gacanta, muraayadaha indhaha, jeebka, iwm (oo ku habboon ciidaha)! Jeebabka ragga ee sida wanaagsan loo sameeyay waxay u adkeysan karaan khilaaf iyo xiisad badan.
(2) Boorsooyinka suumanka ayaa aad ugu badan, qaarkood xitaa way yar yihiin. In kasta oo ay noqon karaan kuwo wax ku ool ah, waxaan u maleyneynaa inay kuwani u eg yihiin bayaannada moodada. Waxaan ogaanay inaan xirno dharkaas gaaban markaan xirano gaagaaban, maxaa yeelay goomayaasha qaar waxay leeyihiin jeebado yar yar mana heysan karaan wax walba. Laakiin markaad rabto inaad xirato dharka waddooyinka casriga ah, boorsada suunka moodada ugu fiican ayaa ah xulasho wanaagsan.
(3) Boorsooyinka suunka waxaa badanaa lagu gartaa midabbo dhalaalaya, mararka qaarkood naqshadaha moodada ah, iyo astaamo iyo sumado indhaha soo jiita.
(4) Bacda dhexda waxaa lagu gartaa naqshad aad ufiican oo la taaban karo, magac calaamado yar iyo astaan, iyo mararka qaar jeebab ka badan intaad moodeysid, waxayna u egtahay inay dareento adkeysi iyo xoog badan. Waxaad ku gashan kartaa dharka waddooyinka aad jeceshahay iyo dharka shaqada ee magaalooyinka.
(5) Bacda ugu yar uguna yar ee la ogaan karo waa suunka ama kiishka dhexda (ama bacda dhexda sida magacu tilmaamayo, waxaa lagu xiraa dhexda) Tani waxay leedahay dhowr faa iidooyin sababtoo ah waa amaan, wayna u fududahay qofka xiran inuu gaaro, wuuna qaado nooca alaabta aad u baahan tahay inaad kaxaysato, gaar ahaan markaad fasax ku maqan tahay.Waxay ka samaysan yihiin qalab kala duwan, oo ay ka mid yihiin maqaar iyo cudbi tolmo wanaagsan leh, waxa kaliya ee ay ku kala duwan yihiin labadooda ayaa ah in bacda suunka ay ku xidhan tahay Suunka, halka bacda dhexda ay leedahay suun dhameystiran.Beellada iyo jeebabka ayaa caan ku ah socdaalka iyo ragga oo aan u baahnayn wax badan oo ay qaadaan.
(6) Boorsada dhexda ragga waxay leedahay shaqooyin badan, oo ka bilaabmaya fudeyd, aad ugu haboon safarka, waxay kuu ogolaaneysaa inaad qaadatid wax kasta oo aad ubaahantahay markaad booqaneyso ama aad sahamineysid adigoon ku darin culeys dheeri ah. Qeyb gaar ah ayaa sidoo kale ah faa'iido weyn, waxay ku habboonaan kartaa taleefan kasta oo leh shaashad 5.8-inji ah, baasaboor, tigidh, boorso yar ama wixii kale ee yaryar ee aad u baahan tahay inaad ku qaadato. Waxa kale oo ay leedahay jeeb jiinyeer qarsoon oo lagu keydin karo lacag caddaan ah, kaararka ama dukumiintiyada aqoonsiga.
(7) Bacdan dhexda ah, waad ku socon kartaa, ku orodsan kartaa, baaskiil ku kori kartaa, oo aad ka qayb geli kartaa xafladaha muusikada, ciidaha iyo waxyaabo kale oo badan!
(8) Waxaad u isticmaali kartaa boorsadan dhexda biyuhu ka galaan hawlo kala duwan oo xiiso leh oo xiiso leh. Hawlaha biyaha sida dabaasha, bood boodka, fuulida, kalluumaysiga, fuulitaanka, quusitaanka iyo kayak ilaa safarada barafka sida barafka, barafka ama socodka barafka, ilaa hawlo badan oo "dhulka" ah sida dhiiqo, fuulitaan, iyo socodka, Baaskiil iyo inbadan!
2. Xuduudaha sheyga boorsada dhexda ragga (qeexitaanno)
Dhererka 28cm X Ballaca 11cm X Dhererka 13cm
4. Xirxirida iyo rarka jeebka ragga
(2) Cabbirka baakadka caadiga ah: dhererka 28cm X ballaca 11cm X dherer 13cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 30cm X 39cm X 40cm. 60PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
Calaamadaha kulul: Boorsada dhexda ragga, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka